rafozan-doza | Aprily 2020
Sarotra be ny mitsikera ny hoe ataon’i rafanja sy ny mpitondra satria krizy mafonja ary tena hoe tsisy hoe nateraka na hoe nohalehibiazina hiatrika zavatra toy izao.
Raha tsisy confinement dia asa, marina fa misy ny tsy ho faty fa tena mety ho aman’hetsiny no ho faty. Ny antsika hono kay azo isaina @ rantsa-tanana ny respiratoire artificiel.
Dia izay e, ankoatry ny hoe genocide sy hoe crime contre l’humanite… dia ny hoe raha ny RAD na havanao no lasa, ho vitanao ve ny hijery fotsiny?
Raha asiana confinement anefa. Isika mazava fa firenena mahantra. Izay tsy vitan’ny corona, ho vitan’ny fahantrana. Marary ary ory ny fo maheno ny tantara hoe tantsaha mandeha an-tongotra adiny firy, hande hivarotra entana dia adiny 1 fara faha-betsany no afaka mivarotra. Sady reraka no maty antoka kanefa tsy afa manoatra. Mahatra ve moa ho aiza eo.
Ra ianao tokoa moa no eo @ toerana: raha tsy mihinan-kanina siora fa ho faty, raha voan’ny corona mety misy chance tsy ho faty. Mazava ny lalana. Mety eo @ 2 na 3 volana eo ho eo @ fahatongavan’izany isika. Tsy maniry loza aho fa mety ady an-trano sy adim-poko no hiafaran’io. Dia miverina @ ilay aman'hetsiny teo ihany.
Asa ity raha hoe kobon’i rafanja fa aleo tenenina ihany ny hoe: mbola vao manomboka ny lalao eto amintsika.
Mazava ve ny stratejia-antsika? Misy ireo manao hoe ekena fa tsy maintsy ho voa daholo ny rehetra fa atao ny confinement mba tsy hibosisika be loatra ny fidirana hopitaly dia mba hoe mahazo immunite tsikelikely ny firenena, mandra-pivoakan’ny vaksiny. Ny antsika ve hoe ho fohanana tanteraka ny tsimo-karetina? dia ho hakatona firy volana izany ny aeroport? ho voatandrina ve izany? Asa, mila mivavaka ihany hoe tena mandaitra tokoa ilay covid-organics… mety gidragidra raha tsy izany.
Tsy fotoan’ny hampifohazana ny hambom-po an’ny firenena ve izao? sady 60 taona no fahaleovan-tena.
A la base (ozy ny tanora) tsy maintsy manomboka @ indostrialization foana ny fandrosoana.
Nahoana isika no tsy mba afaka manosika hoe fambolena a grande echelle (bedabe ny hoe kere eto afaka 3 volana an — ary tsy afaka ny hividy/hanafatra any ivelany akory fa satria samy tsisy manana daholo). Misy firenena afrikana tena hoe izay tazaninao iray manotolo katsaka daholo. Na hoe akondro na vary na ovy na box… izany ve dia tsy vitan-tsika?
Sektera segondera ireny. Manodina ankora ho zavatra ampiasaina eto @ tanana. Nahoana no tsy mba afaka mamorona zavatra eletronika? na hoe motera kely na fanamboarana machine fitotoam-bary aza tsy vita eto… nefa mino marimarina aho fa betsabetsaka ihany ny bandy/sipa avy any @ polytech afaka mi-trav @ zany.
Tsy ho vitan’ny gasy ve ny manamboatra hoe respiratoire vita gasy ohatra… Na tsy hoampiasaina zao aza mety ilaina foana izany any aoriana any.
Science and technology: izany koa ny hoe tsy maintsy atao fototry ny revolusiona. Nareo ve tsy mba lasa saina na hoe mitsiriritra mahita an’ireny hoe North Korea, na hoe Iran dia firenena faran’izay hoe voasazy sy hoe tsy afaka manao na inona na inona kanefa dia mbola lasa lavitra be mihoatra an’i Madagasikara ihany?
Aiza ho aiza ny hoe fahaleovan-tena ara-enerjia?
Na ho marina na ho diso ny visavisa fa ny manetsabe mbola hoavy @ corona, dia tokony miomana rafanja. sao dia tokony ampanjairina (a grande echelle) dieny izao ny fitaovana ho ilain’ny dokotera sy ny sage femme. Ho hilain’ny mpitandro filaminana.
tena hitabe mihintsy ny difference rehefa hoe samy mandray an-draikitra ary omena fahefana/fahalalana hitantana ny diany ny any ampotony.
Tsy ho zakan’ny di-doha sy baiko mihidina avy an-dapa io rehefa hiparitaka manerana ny nosy ny valan'aretina.
Jereo fa misy firenena vitsivitsy somary miavaka @ ny nandraisany sy niantrehany an’ity corona ity. Dia mazava be fa tsy olona anakiray foana no omnipresent @ zao rehetra izao.
Marina alou fa nisy fivoarana ny fanarahan-dalana sy ny hoe minimum de semblance @ etat de droit eto amintsika… kanefa…
somary mahagaga sy hoe mampa-tahotra ihany ny hoe otran’ny tsisy lalana na mba hoe loi de finance rectificative fotsiny aza navoaka fa tonga dia “didy” daholo ny zava-drehetra.
Tsy fotoana tokony hanehoana ny tena hoe fitiavan-tanindrazana sy hoe fitiavana ny vahoaka tokoa ve izao?
Ny role sy hoe asan’ny opposition no tiako hahatongavana eto. Ny ankamaroan’ny “mpi-adversaire” politika maneran-tany rehetra samy nikaon-doha ary miara-miasa @ fitondrana daholo satria hita fa tena latsaka lalina ny firenena. Mba aiza ho aiza isika? mbola ilay interet personnelle foana ve? asa…hevitra miady ve moa tsy hisy fa ny hoe mbola hifamingana ihany nefa efa loza mitatao be. Ny politika mivadika ady personnelle moa dia tsy lazaina intsony.
Nareo ve tsy mba mitsiriritra mahita an’ireny hoe John McCain sy Joe Biden bandy akama be, nefa tena hoe sakay sy maso @ ideolojia ara-politika.
Nahoana no mpinamana i Bush dadany sy i Bill Clinton kanefa ny iray no nanala ny iray teo @ fitondrana?
Asa ianareo raha mahatsikaritra ny hoe marketing sy hoe mythe any @ Bekitana ny @ hoe American dream.
Izay averim-berina matetika hoe ity no tany hahafahan’ny tsirairay manan-tanteraka izay nofinofiny. Rehefa miasa mafy, milofo sy mikiry dia tsy maintsy tafita: arizato ampaosy no ho millionera. Dia lasa kolon-tsaina ary tena inoan’ny olona tokoa. Izany no mampiray hina sy hoe mampiara-mandroso ny rehetra.
Tsy mba misy hoe Revy sy nofinofy Malagasy ve? Ny antsika manko dia ny hoe valala an-karona no mampalaza antsika. Izay mba tafiakatra sady tsy misitona ny hafa hiakatra fa mandetika aza. Ny hafa ihany koa tsy mba miezaka hiakatra fa ny hisitona ny tafiakatra hidina ihany koa…
❤️ 🇲🇬 ❤️ 🇲🇬